မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကွန်ဒိုများ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
စီမံကိန်းအသစ် (ကြိုပွိုင့်) များ
အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းချနည်း အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူနည်း အိမ်ခြံမြေ ငှားရမ်းနည်း အကျိုးဆောင် လမ်းညွန်
အိမ်အလှ ပြုပြင်ရေး အိမ်ပြောင်းမယ် အိမ်ရွှေ့မယ် ငွေကြေးနဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အိမ်နဲ့ ဆိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု့များ
ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်း
ခြံ ၊ မြေကွက်
အလုံ ဗဟန်း ဗိုလ်တထောင် ကိုကိုးကျွန်း ဒဂုံ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ဒလ ဒေါပုံ လှိုင် လှိုင်သာယာ လှည်းကူး မှော်ဘီ ထန်းတပင် အင်းစိန် ကမာရွတ် ကော့မှုး ခရမ်း ကွမ်းခြံကုန်း ကျောက်တံတား ကျောက်တန်း ကြည့်မြင်တိုင် လမ်းမတော် လသာ မရမ်းကုန်း မင်္ဂလာဒုံ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြောက်ဥက္ကလာ ပန်းပဲတန်း ပုဇွန်တောင် စမ်းချောင်း ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ဆိပ်ကမ်း ရွှေပြည်သာ တောင်ဥက္ကလာ တိုက်ကြီး တာမွေ သာကေတ သံလျင် သင်္ဃန်းကျွန်း သုံးခွ တွံတေး ရန်ကင်း ရွှေပေါက်ကံ
အမရပူရ အောင်မြေသာဇံ ချမ်းအေးသာဇံ ချမ်းမြသာစည် ကျောက်ပန်းတောင်း ကျောက်ဆည် လယ်ဝေး မတ္တရာ မြန်အောင်မြေ မလှိုင် မိတ္ထီလာ မိုးကုတ် မြင်းခြံ မြစ်သား နွားထိုးကြီး ညောင်ဦး ပုသိမ်ကြီး ပျော်ဘွယ် ပြည်ကြီးတံခွန် ပျဉ်းမနား ပြင်ဦးလွင် စဉ့်ကိုင် စဉ့်ကူး တံတာဦး တပ်ကုန်း တောင်သာ သပိတ်ကျင်း သာစည် ဝမ်းတွင်း ရမည်းသင်း မဟာအောင်မြေ
ဒက္ခိဏသီရိ ဥတ္တရသီရိ ပုပ္ပသီရိ ဇမ္ဗူသီရိ ဇေယျာသီရိ ဇေယျသိဒ္ဓိ ပညာသိဒ္ဓိ ဘောဂသိဒ္ဓိ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိ
ဘိုကလေး ဓနုဖြူ အိမ်မဲ ဟင်္သာတ အင်ဂပူ ကန်ကြီးထောင့် ကျိုက်လတ် ကြံခင်း ကျောင်းကုန်း ကျုံပျော် လပွတ္တာ လေးမျက်နှာ မအူပင် မော်လမြိုင်ကျွန်း မြန်အောင် မြောင်းမြ ငပုတော ညောင်တုန်း ပန်းတနော် ပုသိမ် ဖျာပုံ သာပေါင်း ဝါးခယ်မ ရေကြည် ဇလွန် တွမ်းဇံ ငွေဆောင်
ပဲခူး ဒိုက်ဦး က၀ ကျောက်ကြီး ကျောက်တံခါး ညောင်လေးပင် အုတ်တွင်း ဖြူး ရွှေကျင် ထန်းတပင် တောင်ငူ သနပ်ပင် ဝေါ ရေတာရှည် ကြို့ပင်ကောက် လက်ပံတန်း မင်းလှ မိုးညို နတ်တလင်း အုတ်ဖို ပန်းတောင်း ပေါက်ခေါင်း ပေါင်းတည် ပြည် ရွှေတောင် သာယာဝတီ သဲကုန်း ဇီးကုန်း
ဖလန်း ဟားခါး ထန်တလန် ကန်ပက်လက် မတူပီ မင်းတပ် ပလက်ဝ တီးတိန် တွမ်းဇံ
ဗန်းမော် ချီဖွေ ဖားကန့် အင်ဂျန်းယန် ခေါင်လံဖူး မချမ်းဘော မံစီ မိုးကောင်း မိုးညှင်း မိုးမောက် မြစ်ကြီးနား နောင်မွန်း ပူတာအို ရွှေကူ ဆွမ်ပရာဘွမ် တနိုင်း ဆော့လော် ဝိုင်းမော်
ဘောလခဲ ဒီမောဆို ဖားဆောင်း ဖရှုးဆိုး လွိုင်ကော် မယ်ဆဲ့ ရှားတော
လှိုင်းဘွဲ့ ဘားအံ ဖာပွန် ကော့ကရိတ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြ၀တီ သံတောင်
အောင်လံ ချောက် ဂန့်ဂေါ ကံမ မကွေး မင်းဘူး မင်းတုန်း မင်းလှ မြိုင် မြို့သစ် နတ်မောက် ငဖဲ ပခုက္ကူ ပေါက် ပွင့်ဖြူ စလင်း ဆော ဆိပ်ဖြူ စေတုတ္တရာ ဆင်ပေါင်ဝဲ တောင်တွင်းကြီး သရပ် ထီးလင်း ရေနံချောင်း ရေစကြို
ဘီးလင်း ချောင်းဆုံ ကျိုက်မရော ကျိုက်ထို မော်လမြိုင် မုဒုံ ပေါင် သံဖြူဇရပ် သထုံ ရေး ကျောက်ဖြူ
အမ်း ဘူးသီးတောင် ဂွ ကျောက်တော် မောင်တော မင်းပြား မြောက်ဦး မာန်အောင် မြေပုံ ပေါက်တော ပုဏားကျွန်း ရမ်းဗြဲ ရသေ့တောင် စစ်တွေ သံတွဲ တောင်ကုတ်
အရာတော် ဗန်းမောက် မုတလင် ချောင်ဦး ခန္တီး ဟုမ္မလင်း အင်းတော် ကလေး ကလေးဝ ကန့်ဘလူ ကနီး ကသာ ကောလင်း ခင်ဦး ကျွန်းလှ လဟယ် မော်လိုက် မင်းကင်း မုံရွာ မြိုင် မြင်းမူ နန်းယွန်း ပုလဲ ဖောင်းပြင် ပင်လယ်ဘူး စကိုင်း ဆားလင်းကြီး ရွှေဘို ဒီပဲယင်း တမူး တန့်ဆည် ထီးချိုင့် ဝက်လက် ဝန်းသို ရေဦး ယင်းမာပင် ငန်းဇွန်
ကျိုင်းတုံ မက်မန်း မိုင်းဖြတ် မိုင်းဆတ် မိုင်းခတ် မိုင်းလား မိုင်းပြင်း မိုင်းတုန်း မိုင်းယန်း မိုင်းယောင်း တာချီလိတ် ဟိုပန် သိန္နီ သီပေါ ကုန်းကြမ်း ကွမ်းလုံ ကွတ်ခိုင် ကျောက်မဲ လားရှိုး လောက်ကိုင် မဘိန်း မိုင်းမော မိုးမိတ် မိုင်းရယ် မူဆယ် နမ့်ဆန် နမ္မတူ နမ့်ခမ်း နောင်ချို ပန်ဆန်း ပန်ဝိုင် တန့်ယန်း ဟိုပုံး ဆီဆိုင် ကလော ကွန်ဟိန်း ကျေးသီးမံစံ လဲချား လင်းခေး ရပ်စောက် လွိုင်လင် မောက်မယ် မိုင်းရူး မိုင်းကောင်း မိုးနဲ မိုင်းပန် နမ့်စန် ညောင်ရွှေ ဖယ်ခုံ ပင်းတယ ပင်လောင်း တောင်ကြီး ရွာငံ နားဖန်း
ဘုတ်ပြင်း ထားဝယ် ကော့သောင်း ကျွန်းစု မြိတ် ပူလော တနင်္လာရီ သရက်ချောင်း ရေဖြူ
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး (သိန်း)
Show Home Loan Propeties
Foreign Ownership Allowed
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ
equalizer Home Loan Partners
Filter by Banks
Sort by : Recommended
Sort by : Price (High - Low)
Sort by : Price (Low - High)
Sort by : Date (New - Old)
Sort by : Date (Old - New)
Filter By Home Loan Partners:
Sort by: Default List
Sort by : Default List
Sort by : All Banks
Sort by : AYA Bank
Sort by : KBZ Bank
Sort by : YOMA Bank
Sort by : CB Bank
Sorry, we couldn't find anything to match that request, please try another option...
မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဘီးလင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ချောင်းဆုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကျိုက်မရော ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ကျိုက်ထို ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မော်လမြိုင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မုဒုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ပေါင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သံဖြူဇရပ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သထုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ရေး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကျောက်ဖြူ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက် မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
Shweproperty.com is the myanmar real estate industry website - the best place to start your real estate search whether you are an investor, buying for own use, or looking foraplace to rent. In Shweproperty, you can find thousands of properties for sale and rent with detailed information about each property, and photos. It's an all-in-one real estate site with the most useful and timely information on real estate markets and trends to help you figure out exactly what, where and when to buy.
New Homes(ကြိုပွိုင့်) မီနီကွန်ဒို ကွန်ဒို တိုက်ခန်း စက်မှုဇုန် လုံးချင်းအိမ် ခြံ ၊ မြေကွက် ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်း Serviced Apartment
အကျိုးဆောင်များ Art of Living သတင်း Find Jobs in Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူများအတွက် အိမ်ခြံမြေ ကြော်ငြာတင်ရန်
Shweproperty.com - Myanmar Property Portal | Myanmar Real Estate Website.